Vanorarama neHurema Voudza Paramende Nhuna Dzavo
HARARE — Sangano remubatanidzwa wemasangano anomirira vanorarama nehurema, reNational Association of Societies for Care of the Handicapped, NASCOH, rinoti zvikamu makumi maviri kubva muzana zvevanhu vanorarama nehurema munyika havana zvitupa kana matsamba ekuberekwa uye izvi zvichavatadzisa kuvhota mureferendamu nesarudzo.
Nyanzvi inoona nezvehurema musangano iri, VaFambaneni Magweva, vaudza komiti inoona nezvezviga zvebudiriro zvakatarwa nesangano reUnited Nations, zve Millenium Development Goals, kuti zvakakosha kuti vezvematongerwo enyika vaone kuti vanhu vese vane hurema vakwanisa kuvhota.
Vati sangano ravo riri kufamba nenyika yese richidzidzisa vanorarama nehurema pamusoro pesarudzo uye pari zvino vafamba mumatunhu madiki gumi nemana.
Vatiwo vari kuda kuti komisheni yesarudzo igadzirise nzvimbo dzese dzichavhoterwa kuitira kuti vanorarama nehurema vakwanise kusvika panzvimbo idzi.
Vati pavanhu vese vanotambura, zvikamu makumi maviri kubva muzana vanhu vane hurema uye zvikamu makumi mapfumbabwe nezvishanu kubva muzana zvevanhu vanorarama nehurema havana mabasa.
VaMagweva vati dambudziko iri rakanyanya kumadzimai sezvo zvikamu zvishanu chete kubva muzana variwo vakaenda kuchikoro.
Vatiwo vanorarama nehurema vachiri kutambura zvisinei nekuti hurumende yakaumba mutemo weDisabled Persons Act muna 1992, ikave nyika yechipiri kuita izvi ichitevera United States.
Asi vati hapana zvakazoitwa kuti mutemo uyu ushande vakati izvi ndizvo zviri kupa kuti vanorarama nehurema varambe vachitambura.
VaMagweva vati kunze kwekuve nemutemo uyu, hurumende inofanira kutsvaga mari yekusimudzira vanorarama nehurema.
Vati makumi maviri emadhora pamwedzi anopihwa pamunhu anorarama nehurema haana chaanobatsira uye pari zvino vazhinji vavo vari kutobatsirwa nemachechi nemasangano anoshanda akazvimirira.
VaTsarai Mungoni avo vanoshandawo neNASCOH, vatsigirana naVaMagweva vachiti kunyange hazvo pane mutemo weDisabled Persons Act, hauna zvauri kuvabatsira.
VaMagweva vatiwo nyaya yekusasimudzira vanorarama nehurema inoita kuti nyika irasikirwe nemari sezvo zvichireva kuti inoramba ichingotsvaka mari yekuriritira vanhu ava.
Vati matambudziko evanhu vanorarama nehurema anogona kupera kana nyika ikasaina nekutevedza chisungo cheUnited Nations chevanhu vanorarama nehurema cheUnited Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
Sangano reNASCOH, iro rinove mubatanidzwa wemasangano makumi manomwe anomirira vanhu vanorarama nehurema, rinoti Zimbabwe ine vanhu mamiriyoni maviri vanorarama nehurema uye zviuru mazana manomwe ndivo vanokodzera kuvhota.
Sachigaro wekomiti yeMillenium Development Goals, Ishe Lucas Mtshane, vatiwo zvimwe zvezvichemo zvataurwa nevanorarama nehurema zvichagadziriswa nebumbiro idzva uye vakurudzira vanhu ava kuti vaone zvavangaite kuti vamwe vavo vapinde muparamende.